« Loza mitatao » i Sisaony sy Ikopa : ahina ny tondradrano eto Antananarivo sy ny manodidina | NewsMada
« Loza mitatao » i Sisaony sy Ikopa : ahina ny tondradrano eto Antananarivo sy ny manodidina
Mananontanona ny tondra-drano ho an’Antananarivo sy ny manodidina. Mitatao ny loza noho ny habetsahan’ny rotsak’orana tsy an-kiato, nandritra ny hateloana. Tsy mitsaha-miakatra ny haavon’ny reniranon’Ikopa sy Sisaony.
Atahorana ho tratry ny tondradrano ireo kaominina maromaro eto Antananarivo raha mitohy ny orana satria ahina hamaky fefiloha maromaro ny reniranon’i Sisaony sy Ikopa, raha ny vinavinan’ny BNGRC tamin’ny tatitra navoakany omaly.
Efa mihatra ny filazana loza mitatao indrindra ho an’ny reniranon’i Sisaony sy Ikopa ary Imamba. Voakasik’izany ny kaominina Masindray, Ambohimanambola, Alasora, Ankaraobato, Tanjombato, Soavina, Anosizato Andrefana, Bemasoandro, Ankadimanga, Ambohitrimanjaka, Ampangabe. Soalandy, Ampanefy, Soavina, Anosizato Andrefana, Ampitatafika, Ambavahaditokana, Fenoarivo, Itaosy, Ambohitrimanjaka, Fiadanana, Ampangabe, Sabotsy Namehana, Ankadikely Ilafy, Ambohibao Antehiroka, Talatamaty ary Iarinarivo.
Ahina ho vaky ihany koa ny fefiloha eny Fenoarivo, distrikan’Atsimondrano. Efa tazana manao vonjy ranovaky ny mponina teny an-toerana omaly.
Tandindomin-doza koa ny fokontany Antsahasoa sy Ambohipotsy Ambany noho ny fihotsahan’ny tany eny an-toerana. Toraka izany ny eny amin’ny fraritra avo ka voatery nafindra toerana, araka izany ireo olona 160 tao amin’ny fokontany Manjakamiadana sy Andohamandry ary Miandrarivo.
Ahitana fihotsahana koa ny eny Ambatobe ka manelingelina ny fifamoivoizana izany.
Raha ny mari-pandrefesana ny rano eo Anosizato, mirefy 1,99 m ny refin’ny rano raha 3 m ny loza manambana araka ny fampitoniana asesiky ny tompon’andraikitra voalohany ao amin’ny Apipa. Ny eo Bevomanga, vao 2 m ny mari-drefy raha 4 m ny loza manambana. Mitondra ny rano amin’ireo renirano telo mamarina ny rano any Farahantsana ny eo Bevomanga.
Efa mandefa ny « station de pompage » eny Ambodimita kosa ny Apipa handrindrana ny fikorianan’ny rano mihandrona eto Antananarivo.
8.191 ireo traboina
Efa mahatratra 8.191 ireo traboina raha ny eto Analamanga ary anisan’ny tena lasibatra ireo mipetraka amin’ny faritra iva sy manamorona ny renirano. Maromaro ireo toerana itobian’ireo traboina izay sahanin’ny minisiteran’ny Mponina. Anisan’izany ny eny Ankazomanga, Ankorondrano Andrefana ary Tsaramasay. Misokatra ho azy ireo koa ny eny amin’ny Madcap sy Seba Isotry.